လာဖို့ ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာ လက်ရှိအလုပ်အားလုံး တဝက်လောက် ပျောက်လားဖို့ တရုတ်မှတ်ဉာဏ်တုဆရာကြီး သတိပီး | Great Arakan
Home Business လာဖို့ ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာ လက်ရှိအလုပ်အားလုံး တဝက်လောက် ပျောက်လားဖို့ တရုတ်မှတ်ဉာဏ်တုဆရာကြီး သတိပီး
FILE PHOTO © Reuters / Steve Marcus
လက်ရှိ လုပ်နိန်ကတ်တေ အလုပ်အားလုံး တဝက်လောက်စွာ လာဖို့ ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပျောက်လားဖို့လို့၊ တရုတ်နိုင်ငံက မှတ်ဉာဏ်တု(artificial intelligence (AI)) ဆရာကြီးက သတိပီးလိုက်ပါရေ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာကို နှစ် ၃၀ လောက် ဦးဆောင် လုပ်လာရေ၊ ကိုင်-ဖူး လီး(Kai-Fu Lee)က ကဗာမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှု ပြဿနာ အကြီးအကျယ် ဖြစ်လာဖို့လို့ဆိုပါရေ။ လာဖို့ တနင်္ဂနီနိ စီဘီအပ်ဆ် မိနစ် ၆၀(CBS 60 Minutes) ရုပ်သံအစီအစဉ်ထဲမှာ အသစ်လာဖို့ ကဗာသစ်အတွက် လူသားတိ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုဗျာလ်ဆိုစွာကို၊ လီး က ပြောလားပါဖို့။ လာဖို့ ခေတ်မြင်ကွင်းနန့်အညီ၊ မျိုးဆက်သစ်တိအတွက် ပညာရေးစနစ်တိကို ပြောင်းလဲထားဖို့ လိုဗျာလ်လို့ လီး က ဆိုပါရေ။
File Photo: Lee is the former vice-president of Google Inc. and former co-president of Google China. © Reuters / Bobby Yip
လူသားတိ စဉ်းစားရေပိုင် စဉ်းစားနိုင်ရေ ကင်ပျူတာ မှတ်ဉာဏ်တုက လူသားတိ အနာဂတ် ဖြစ်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ယကေလည်း မှတ်ဉာဏ်တုက အားလုံးတော့ မလုပ်နိုင်လို့ လီး က ဆိုပါရေ။ တချို့ အသက်မွီးဝမ်းကျောင်း အလုပ်တိကိုတော့ မှတ်ဉာဏ်တုနန့် အစားမထိုးနိုင်လို့ ဆိုပါရေ။ ကုသရေးအလုပ်တိ၊ သူနာပြုအလုပ်တိ၊ စာသင်ပြရေ ဆရာအလုပ်တိ၊ ဆရာဝန်အလုပ်တိပိုင်၊ လူ့ ခံစားချက်တိ ထည့်ဖို့လိုရေ၊ လူ လူချင်း ထိတွိဆက်ဆံဖို့ လိုရေ အလုပ်မျိုးတိတော့ မှတ်ဉာဏ်တုနန့် အစားမထိုးနိုင်ဘဲ၊ ကျန်ခဖို့လို့ ဆိုပါရေ။
ဆန်းသစ်တေ၊ တီထွင်ရေ အသက်မွီးဝမ်းကျောင်း ပညာရှင်တိလည်း ကျန်ခဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ဇာဖြစ်လို့ဆိုကေ မှတ်ဉာဏ်တုက သိပ္ပံပညာရှင်တိ တွေးရေပိုင်၊ မရှိသိမ့်ရေ အတွေးမျိုးတိကို မတွေးနိုင်လို့ပါ။
လာဖို့ နှစ် ၂၀ မှာ၊ မှတ်ဉာဏ်တု ထည့်ထားရေ စက်ရုပ်တိနန့် အယင်ဆုံး အစားထိုးလာဖို့ အလုပ်တိက တယ်လီဖုန်းနန့်ခေါ်ပနာ ကြော်ငြာရေ အလုပ်မျိုးတိ၊ တယ်လီဖုန်းနန့် စျီးရောင်းရေ အလုပ်တိ၊ စျီးဝယ်ရေ လူတိကို အကူလုပ်ပီးရေ အလုပ်မျိုးတိ၊ သိုလှောင်ရုံ အလုပ်သမားတိ၊ ငွေစရင်းကိုင်တိ၊ အယင်စာ အလုပ်သမားတိ၊ လောင်ဗွန်းဆီး သမားတိ ဖြစ်တေလို့ ဆိုပါရေ။
I will be on CBS @60minutess this Sunday (January 13). https://t.co/XWzO7zuvRS
— Kai-Fu Lee (@kaifulee) January 9, 2019
“မှတ်ဉာဏ်တုက စဉ်းစားစရာ မလိုဘဲ၊ ပုံမှန် လုပ်နိန်ရရေ အလုပ်မျိုးတိကို တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလားပါလိမ့်မေ။ အလုပ်ကြမ်းသမားတိ အလုပ်မျိုးတိကျေး မဟုတ်ပါ။ ပညာတတ်တိ လုပ်နိန်ရေ အလုပ်မျိုးတိလည်း အများကြီး ပါလာပါဖို့။” လို့ လီး က ပြောပါရေ။
“အငှားကား ဒရိုင်ဘာတိ၊ ကားကြီးမောင်း ဒရိုင်ဘာတိ၊ ကားမောင်းပနာ အသက်မွီးနိန်ရေ လူတိအလုပ်ကတော့ လာဖို့ ၁၅ နှစ်နန့် ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ လုံးဝ ပျောက်လားပါလိမ့်မေ။”
လီး နန့် တွိဆုံခန်းကို လာဖို့ တနင်္ဂနီနိ စီဘီအပ်ဆ် မိနစ် ၆၀(CBS 60 Minutes) ရုပ်သံအစီအစဉ်ထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။
မှတ်ချက် – အဂုတောင် လန်ဒန်က ဆူပါမာ့ကတ်ကြီးတိမှာ ပစ္စည်းတိကို ကိုယ်တိုင် ဆကန်ဖတ်ပနာ ဖေသာပီးနိုင်ရေ စက်တိနန့်၊ အရောင်းဝန်ထမ်း နိန်ရာတိကို တစတစ အစားထိုးလာနိန်လာပါဗျာလ်။ တချို့ ဆိုင်တိမှာ အရောင်းဝန်ထမ်း လုံးဝ မရှိဘဲ၊ ဆိုင်ဝမှာ ဖေသာ ပီးခ၊ မပီးခ စစ်တေ၊ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်း ၁ ယောက်၊ ၂ ယောက်လောက်ရာ ထားစွာကို တွိရပါရေ။
နောက်ထပ် ဆိုင်က စျီးဝယ်ကင်ပျူတာမှာ ဆကန်ဖတ်လိုက်စွာနန့်၊ ယင်းပစ္စည်း ရောင်းအား၊ ဝယ်အား၊ လက်ကျန်၊ ရောင်းရငွေ၊ အရှုံး၊ အမြတ်၊ အခွန်၊ လက်ကျန် အစရှိရေ အချက်အလက် အားလုံးကို တခါတည်း တွက်ပီးရေ ကင်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ်တိ ထုတ်လာဗျာလ်ဖြစ်လို့၊ အနာဂတ်မှာ စရင်းကိုင် အလုပ်အများကြီးလည်း ယော့ကျလားနိုင်ပါရေ။
ဆီထည့်ပီးလိုက်စွာနန့်၊ သူ့အလိုလို လယ်ထွန်နိန်ဖို့ စက်ရုပ် လယ်ထွန်စက်တိ မကြာခင် ထွက်လာပါဖို့ဗျာလ်။ တန်ဖိုး ကကောင်း မကြီးနိုင်ပါ။ လယ်ထွန်စက် တလုံး တန်ဖိုးမှာ၊ လယ်ကန်သင်းတိကို သိနိုင်ရေ အာရုံခံဆန်ဆာတိနန့် မှတ်ဉာဏ်တု ထည့်ထားရေ ကင်ပျူတာ အငယ်ချေတလုံး တန်ဖိုးရာ ထပ်ပေါင်းရပါဖို့။
Previous articleပြင်သစ်အစိုးရအတွက် အိမ်မက်ဆိုး ဖြစ်လာနိုင်ရေ အဝါရောင်အင်္ကျီဝတ်တိ လုပ်ရပ်သစ်
Next articleအိန္ဒိယက ယူအပ်စ်ကို ကျော်ပနာ ကဗာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး စီးပွားရေး ဖြစ်လာဖို့